Nodidiana In-43 tao Anatin’ny 25 Taona ny Anabavy Cecilia Alvarez ary Tsy Nampidiran-dra Mihitsy
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Armenianina Azerbaijaney Cebuano Chichewa Danoà Espaniola Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Brezilianina Tiorka Tseky Yorobà
Ankavia: Sarin’i Cecilia Alvarez tany anaty gazety mpiseho isan’andro, taorian’ny fandidiana faha-17 natao taminy, tamin’izy folo taona; ankavanana: Cecilia sy ny ray aman-dreniny ary ny zandriny vavy, tamin’ny Mey 2019
Narary mafy foana ny Anabavy Cecilia Alvarez, any Arzantina, hatramin’ny mbola kely. Nodidiana voalohany izy tamin’ny 18 Mey 1994, izany hoe 16 andro taorian’ny nahaterahany. Nisy olana tao amin’ny hazondamosiny dia izay no nahitsin’ny dokotera tao Arzantina. Mahavariana hoe nodidiana in-43 izy tato anatin’ny 25 taona, ary tamin’izy mbola kely ny ankamaroany. Tamin’ny voalohandohan’ity taona ity izy no nodidiana farany, teo amin’ny ilany havia amin’ny andilany. Vita soa aman-tsara ilay izy sady tsy nampidiran-dra izy, hoatran’ny fandidiana azy hatramin’izay ihany.
1999: Cecilia, tamin’izy dimy taona, ao amin’ny Hopitaly Juan P. Garrahan
Hoy i Cecilia: “Mampiferinaina be ilay hoe didiana imbetsaka ny vatanao dia manaraka fitsaboana isan-karazany ianao.” Miezaka ny tsy ho kivy sy hitoky amin’i Jehovah anefa izy. Manaraka akaiky an’izay lazain’ny dokotera koa izy, sady ampian’ny ray aman-dreniny. Hoy izy: “Tena mila manomana ny vatako aho isaky ny hodidiana. Misy fanafody sy sakafo sasany tsy maintsy hohaniko mba hampitomboana ny liomena ao amiko.”
Milaza ny zavatra tsapany momba an’ireo mpitsabo nikarakara azy i Cecilia. Hoy izy: “Tena ankasitrahako ny asa ataon-dry zareo satria tsy vitan’ny hoe namonjy ny aiko ilay izy fa tena hajain-dry zareo koa ilay safidiko hoe tsy hampidiran-dra.”
Dr. Ernesto Bersusky, mpitsabo hazondamosina, efa misotro ronono
Nilaza koa ny dokotera nitsabo an’i Cecilia hoe manaja azy sy ny mpiara-mivavaka aminy izy ireo. Lehiben’ny mpitsabo hazondamosina tao amin’ny Hopitaly Juan P. Garrahan, hopitalin’ankizy any Buenos Aires, ny Dr. Ernesto Bersusky. Anisan’ny nandray anjara imbetsaka tamin’ny fandidiana an’i Cecilia izy. Hoy izy: “Isaky ny nitsabo an’i Cecilia aho, dia tsapako foana hoe vonona be izy ary hainy tsara ny manazava ny zavatra inoany. Nohazavaiko taminy foana hoe inona no hataoko, dia nomeko toky izy hoe tsy hampiditra ra aminy aho.”
Pr. Susana Ciruzzi, mpahay lalàna sy mpamolavola fitsipika mifehy ny fitsaboana
Mpahay lalàna ny Pr. Susana Ciruzzi, sady anisan’ny komity mametraka ny fitsipika mifehy ny fitsaboana ao amin’ny Hopitaly Juan P. Garrahan. Hoy izy: “Nisy fiaraha-miasa tsara teo aminay mpitsabo sy ny Vavolombelon’i Jehovah. Nanaiky izahay hoe hanova ny fomba fisainanay sy ny fomba fiasanay, dia izany no nahitanay teknika fitsaboana hafa ankoatra ny fampidiran-dra.”
Tena mankasitraka ny ataon’ny mpitsabo azy i Cecilia. Tsapany koa hoe nanampy be azy ny mpiara-manompo. Hoy izy: “Misaotra betsaka ny Komity Mifandray Amin’ny Hopitaly (KMH) sy ny Antokona Mpamangy Marary aho. Manam-bady aman-janaka ireny ranadahy ireny sady be andraikitra, nefa vonona hanome ny fotoanany sy ny heriny. Eo foana ry zareo raha vao mila azy aho. Sarobidy be amiko ny fanampian-dry zareo.”
Efa 25 taona izao i Cecilia. Manaintaina lava izy ary mampiasa seza misy kodiarana. Ankizivavy falifaly anefa no ahafantaran’ny olona azy. Izao mihitsy no teniny: “Ireny zavatra nampahatahotra niainako ireny no nanampy ahy ho tsara toetra kokoa sy hanahaka kokoa an’i Jesosy.”
Jolay 2019: Cecilia sy ny anabavy mpisava lalana iray, miara-manompo
Hoy ihany i Cecilia: “Avy nodidiana aho, indray mandeha, dia nitsidika ahy ny ranadahy iray anisan’ny KMH. Noresahiny tamiko ilay Ohabolana 10:22 hoe: ‘Ny fitahian’i Jehovah no mampanan-karena ary tsy ampiany fahoriana [maharitra] izany.’ Nanohina ny foko ilay andininy dia tsy hadinoko mihitsy.”
Nahazo fitahiana manokana i Cecilia tamin’ny 1 Mey 2019, satria voatendry ho mpisava lalana maharitra. Hita mihitsy hoe manohana sy mampahery an’io anabavintsika io i Jehovah. I Cecilia koa moa faly erỳ miresaka momba ny hafatra mampahery avy ao amin’ny Baiboly.
Matoky isika hoe hampahery antsika rehetra foana i Jehovah, na inona na inona olana atrehintsika, hoatran’ny ataony amin’i Cecilia.—2 Korintianina 1:4.
Hizara Hizara Nodidiana In-43 tao Anatin’ny 25 Taona ny Anabavy Cecilia Alvarez ary Tsy Nampidiran-dra Mihitsy